Amanye amadoda aqotho ase-UKZN.
Mhla zi-2 kuMfumfu i-Residence Life Office eMnyangweni Wezindaba Zokuhlaliswa Kwabafndi, ngokubambisana ne-Gender Equality, bebehlele ingxoxo esihloko sithi Becoming Men of Virtue. Isiqubulo besithi Pro women is not anti-men, Man up! Silence is violence, okusho ukuthi ukweseka abesifazane akusho ukuzonda abesilisa, Khuluma ndoda! Ukuthula kusho indluzula lomcimbi ubuhlose ukuqeda indluzula ebhekiswe kubantu besifazane, ukubulawa kwabantu besifazane nokungalingani ngokobulili ngokufundisa amadoda ase-UKZN.
Abaxhasi iMaswi ne-Ayanda Msweli Foundation baqinisekise ukuthi lomcimbi ube yimpumelelo kwathi zonke izimenywa zathola izikhwama zezipho noMqhele abawugqoke emcimbini, ukukhombisa amadoda aqotho.
UNks uQhamo Gumede, obhekele ezokuthuthukisa izitshudeni obehlele lomcimbi, wemukele bonke abebekhona, obekukhona kubona noSolwazi Albert Modi, iPhini LeSekelashansela leKolishi leZolimo, EzobuNjiniyela neSayensi noMqondisi Omkhulu Wesikhashana uSolwazi osathatha umhlalaphansi kodwa oqhubekayo nokuba nguSolwazi uFikile Mazibuko, obambe iqhaza ku-YouTube. ‘Umsebenzi wethu wukuthuthukisa abafundi ngokuphelele nokuhlela izinhlelo zokuthuthukisa abasebenzi,’ kusho yena. UGumede uthe uhlelo i-Men of Virtue luzofakwa kwi-UKZN Residence Life Curriculum yangowezi-2022, wase ekhuthaza abafundisayo ukuthi nabo balandele.
Enkulumweni yakhe, uModi ugxile ezintweni ezilindeleke emadodeni emphakathini. ‘Emnyombweni wesifisa ukukwenza singabaholi wukuqeda ukungalingani,’ kusho yena. Wengeze ngokuthi: ‘Wumcimbi wokuqala onjengalona e-UKZN selokhu ngaba khona eNyuvesi. Egameni labaholi base-UKZN, ngibongela uQhamo ngokuwuhlela.’
Umphathi wohlelo, umfundisi woMlando weZomnotho noqeqeshela ukukhuthaza abantu uDkt Maserole Kgari-Masondo uqale ngokucula ingoma ethi Madoda Lalela, wakhuthaza izethameli ukuthi zicule nazo, zidlale imidlalo emnandi zisebenzisa imiqhele yazo ukugcizelela umyalezo wakhe.
Umfundisi wase-Durban University of Technology ne-Project Manager ye-Imbali Education and Innovation Precinct uMnu Mfanozelwe Shozi ukhulume ngokuthi kusho ukuthini ukuba yindoda eqotho esikhathini sanamuhla. Ubalule isidingo sokuphucula izinga lobuqotho emphakathini nobumqoka bokukhulisa kahle izingane. Ukhulume ngomphumela wesikhathi sobandlululo nowesikhathi sangemva kwesobandlululo, waphetha ngobuhle bezinkundla zokuxhumana.
Umsunguli weMsweli Foundation nomethuli wohlelo emsakazweni Ukhozi FM uMnu Ayanda Msweli ukhulume ngeqhaza lentsha yesilisa odlameni ngokobulili nokuphepha emgwaqweni ecaphuna encwadini yakhe ethi Qapheqolo Njengonwabu: Ingwenya.
Umdidiyeli we-UKZN Residence Life uMnu Thabani Chagi uzwakalise imibono yakhe ngokuthi yini ubuqotho nokuthi kusho ukuthini ukuba yindoda eqotho. ‘Kwenzeke kanjani ukuthi sigcine sesiyisizwe sabantu abakhohlakele kanjani kwaze kwagcina sekungumsebenzi womthetho ukuthi ube yiphoyisa elisiqondisayo njengoba siyinhlakanhlaka kanjena?’ kubuza yena.
Inhloko YoMnyango Ebambile eMnyangweni wezeMfundo Yomphakathi neZolwazi uMnu Rubbuh Raletsemo ugxile emadodeni nasebefaneni abasebenzayo ukuthi bagqugquzele ukulingana ngokobulili, ukungahlukumezi ngokobulili, ububhoklolo namalungelo abantu besifazane. Uthe: ‘Ukuqeda indluzula kuhlomulisa abantu besilisa nabesifazane.’
Umfundisi omkhulu weZenhlalakahle uDkt Maud Mthembu ubheke indaba yokwelapha amadoda ngaphakathi, ukubhekana nobuhlungu basebunganeni nobuhlungu obungaphakathi. ‘Izingane eziningi azikwazi ukuthola usizo lokwelashwa nolokwelulekwa ukuze zikwazi ukubhekanda nemizwa yazo nokuthi ziqine ngokomoya,’ kusho yena.
Kulandele isigaba semibuzo nezimpendulo, izethameli zathola ithuba lokubuza izikhulumi.
UModi uvale umcimbi ngokukhanyisa ikhandlela kwathi Inhloko yoMnyango eBambile yoMnyango Wezindaba Zezokuhlaliswa Kwabafundi uMnu Thoba Mthembu wabonga uNks Gumede ngokuhlela umcimbi oyimpumelelo, wabalula umehluko phakathi kokuba yindoda ezithembayo nephakeme.
Umcimbi oqoshiwe ku-YouTube utholakala ngokungena ku: https://bit.ly/3iDe3Lf
Amagama: nguLangelihle Meluleki Mathe
Isithombe: nguSethu Dlamini